Mbola mamantatra ny lanjan'izy ireo ny Gazety. Martech Zone
Mbola mamantatra ny lanjan'izy ireo ny gazety
Alarobia, Oktobra 14, 2009 Alakamisy Oktobra Oktobra 15, 2009 Douglas Karr
Efa elaela izay no nitabataba momba ny gazety. Hatramin'ny nahatongavako tamin'ny indostria dia mbola ao anaty rako io ary mety ho izany foana. Ny gazety voalohany niasako dia efa amidy, ary ny gazety eo an-toerana kosa dia misento farany. Tahaka ny maro, tsy mamaky gazety intsony aho, raha tsy mahita lahatsoratra atolotra amin'ny alàlan'ny Twitter na iray amin'ireo fahana izay nohaniko.
Amin'ity volana ity Magazine .NET manonona lahatsoratra fohy momba ny fomba mety hanandramana Google sy micropayments afa-tsy ny indostrian'ny gazety. Toa nanolotra tolo-kevitra ho an'ny Fikambanan'ny Gazety any Amerika i Google momba ny drafitra hampiasa micropayments. Raha ny marina dia heveriko fa hevitra mahatsiravina ity. Newspaper -tserasera tsy dia mandeha amin'ny laoniny ny mpamaky - noho izany tsy mino aho fa mangataka denaria iray na roa no valiny.
Jamba ny gazety noho ny sandany. Ny gazety maimaimpoana dia manana tantara maro loko eto amin'ity firenena ity… hatramin'ny 40% ny tombom-barotra amin'ny famoahana doka isaky ny vazan-gazety. Mandehana any amin'ny efitrano fivorian'ny gazety ary ny resaka dia momba ny vola miditra amin'ny doka sy ny fomba hitazomana ny fanontana ranomainty amin'ny hazo maty hahazoana tombony. Mandehana any amin'ny mogul gazety ary miresaka momba ny fanapahana mpiasa izany, hampihena ny vidin'ny pejin-gazety, ary - izao fotsiny - ny fomba hanombohana ahazoana tombony amin'ny Internet.
Tsy misy amin'ireo resaka nifanaovana ireo dia ny talenta an-tsoratry ny mpanao gazety amin'ny fandavahana lahatsoratra lalina sy fanoratana izay mitazona ny olona ho faly ary mitazona ny demokrasia. Roa taona lasa izay dia nolazaiko izany maty ny fivarotana vaovao… Mieritreritra an'io aho izao.
Ity ny torohevitro ho an'ny gazety:
Aza amidy amin'ny mpamaky ny atiny. Amidio amin'ny vavahady, tranokala ary orinasa ny atiny. Avelao ny tranonkala hitady sy hanivana ny vaovao tian'izy ireo haseho, avelao izy ireo hampiditra ny atiny ao amin'ny tranonkalany manokana, ary avelao izy ireo hanolotra azy amin'ny fomba itiavany azy… amin'ny sarany.
Mety nanjary fitaovana fanaovana dokambarotra mahomby nandritra ny taona maro ny gazety, saingy mila miverina amin'ny fotony izy ireo… manome atiny lehibe amin'ireo mpanoratra manan-talenta amin'ny indostria sy ny faritra misy azy avy.
Ny fizotry ny famindrana tantara avy amin'ny hevitra ka hatrany amin'ny fanontana dia dingana tsy mampino izay, araka ny hevitro, dia nopotehina tato anatin'ny taona vitsivitsy. Mila miverina amin'ny fotony ny gazety raha maniry ny ho velona. Avelao ny mpanao gazety hanao anarana ho an'ny tenany, handoa azy ireo noho ny zava-bitany ao anatiny, avelao izy ho kintana rock. Tsy midika izany fa tsy maintsy mivarotra ny fanahin'izy ireo ny mpanao gazety… azon'izy ireo ny maha-zava-dehibe ny laza madio.
Tiako manokana ny mameno ny atiny Martech Zone miaraka amin'ny atiny avy amin'ireo mpanao gazety matihanina ka samy malalaka ny lohahevitra sy ny atiny ary lalina… nefa mitazona ny vidiny ambany.
Ireo any ivelan'ny indostria dia efa mahita ny fotoana mety. Nanomboka ny namana Taulbee Jackson Serivisy atiny nomerika Raidious, ary ny orinasany dia mindrana ny fizotrany sy ny talenta amin'ny sehatry ny gazety. Mampihomehy, ny gazety iray teo an-toerana no nanao lahatsoratra amin'ny fanombohana.
Tsy azoko antoka raha misy fanantenana ho an'ny gazety hisintona ny tenany hiala amin'ity vatany ity. Halako fotsiny ny mahita fa very ny talentan'ireto fikambanana ireto. Sarotra ny mahita atiny lehibe ankehitriny… noho izany ny filàna haino aman-jery sosialy mitady fikarohana be pitsiny kokoa. Ny gazety dia afaka mametaka ny banga, mitazona ny talentany ary miverina amin'ny tombony.
Tags: horonantsary fandraharahanacazoomisolontena fanampiana ny mpanjifatantaran'ny infografikaStumbleUponfampitahana matetika
Marketing Marketing Multi-Channel iraisana avy amin'ny Podium
Tokony ho eo amin'ny media sosialy ny marikao
15 Okt 2009 amin'ny 1:46 PM
Heveriko fa marina amin'ity ianao. Ny orinasan-gazety dia (ary tokony ho eo indray) amin'ny sehatry ny vaovao fa tsy ny orinasa dokam-barotra. Maninona raha araraotina izay efa ananan'izy ireo - mpanao gazety - ary omeo fotodrafitrasa hikarakarany ny asan'izy ireo. Ny maodely dia hitovy amin'ireo mpandraharaha amin'ny trano sy tany izay mifanaraka amin'ny maso ivoho manokana.
Curt Franke, Vahaolana BitWise
16 Okt 2009 amin'ny 12:49 PM
Milaza ianao fa ny mpamaky gazety an-tserasera "tsy dia mandeha tsara". Araka ny lazain'i Quantcast:
NYTimes.com -> tranonkala laharana faha-45
LATimes -> tranokala faha-110
SFGate.com -> Tranonkala laharana faha-133
WashingtonPost.com -> tranonkala laharana faha-152
NYDailyNews.com -> tranonkala laharana faha-160
Raha heverina fa tranokala eo an-toerana ireo (na dia misy aza ny antso nasionaly), ary raha heveriko fa mifanohitra amin'ireo tranonkala toa ny facebook, google ary yahoo ireo laharana ireo dia lazaiko fa tsara ny mpamaky. Ny fahafahan'izy ireo manangona vola dia fanontaniana iray hafa tanteraka.
Oct 19, 2009 amin'ny 3: 31 AM
@Halwebguy laharana dia fakana sary, azafady mba jereo ny fironana amin'ireto orinasa ireto. Nytimes dia niondrana an-tsambo tamin'ny taona 2009 ary vao tsy ela akory izay no nanomboka nanangana mpamaky an-tserasera. Latimes dia fisaka tamin'ny taona lasa. SFGate dia fisaka nandritra ny 2 taona. Washingtonpost.com dia tena nirongatra ambany tamin'ny taona lasa. NYDailyNews.com no hany hita fa mivoatra tsara.
Ataovy ao an-tsaina fa ny famoahana tranonkala vitsivitsy ambony dia tsy milaza ny tantaran'ny indostria iray manontolo na izany aza! Mamaky ny sasany amin'ireto tranonkala iresahanao ireto aho… saingy ataoko izany satria nofoanako ny taratasy teo an-toerana ary najanoko ny famakiana azy isan'andro. Amin'ny ankapobeny, mitohy mihena ny mpamaky gazety an-tserasera.